Resadresaka niaraka tamin’i Cristina Quisbert an’i Voces Bolivianas · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 19 Desambra 2007 5:50 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Português, Deutsch, বাংলা, Español, 繁體中文, 简体中文, English
Iray tamin’ireo tetikasa fampitam-baovaon’olom-pirenena dimy nahazo ny vatsin’ny Rising Voices tamin’ny volana jolay 2007 ny Voces Bolivianas (’ Feo boliviana’). Notarihin’i Mario Duran, i Eduardo Ávila, ary i Hugo Miranda,[es] tamin’ny alalan’ny atrikasa valo notanterahina indroa isan-kerinandro tao amin’ny toeram-pivoizana aterineto iray tao an-tanànan’i El Alto any Bolivia nandritra ny roa volana ity tetikasa taratra ity. Ankoatra ny mahatanàndehibe miorina amin’ny toerana avo indrindra azy manerantany, dia fantatra amin’ny fahamaroan’ny indizeny ao aminy sy ny anjara toerana lehibe nananany tamin’ny krizin’ny entona fandrehitra tamin’ny taona 2003 ny tanànan’ny El Alto . Na dia tanàna fitodian’ny vahiny rehetra avy any ivelany aza ny tanànan’i El Alto dia toy ny ankodahodan’ny faritra ambiny ao amin’ny fireneny izy na amin’ny aterineto izany na amin’ny tena fiainana.
23 raha atambatra ny isan’ireo nandray anjara tamin’ny fiofanan’ny tetikasa taratra Voces Bolivianas mba hahaizan’izy ireo mamaham-bolongana, mamoaka rakitsary, eny fa na dia ny mamoaka lahatsary aza. Anisan’ny tena niavaka tamin’izany fiofanana izany i Cristina Quisbert izay mpianatra eny amin’ny anjerimanontolo ary mamahana ny bolongana Bolivia Indígena . Olona sariaka izy ka nanaiky hamaly tamin’ny alalan’ny mailaka ny resadresaka izay natao taminy.
Inona no namparisika anao handray anjara tamin’ny Voices Bolivian? Ahoana no nahafantaranao ny momba azy ?
Tamin’ny alalan’ny aterineto no nahitako ny Voces Bolivianas, tamin’ny fotoana nikarakaran’izy ireo ny valandresaka Bloguivianos . Naniry ny handray anjara tamin’io tetikasa io aho satria hitako fa toerana ahafahana maneho hevitra ny zavatra atao. Tahaka ireny ao amin’ny radio ireny e ! misy olona iray miteny dia betsaka ny olona mihaino any rehetra any.
Inona ny fahatsapana tao aminao voalohany momba ny Voces Bolivianas na ny famahanam-bolongana (blaogy) amin’ny ankapobeny? Mino aho fa ny Voces Bolivianas no mpitari-dalana aty, raha nampianatra ny fanao raha hiditra amin’ny tontolo virtoalin’ny bolongana izy. Voces Bolivianas moa amiko manokana no tetezana nahafahana miserasera amin’ny hafa.
Zava-baovao mampazoto, mahafinaritra ary miaina ka mandrava ny sakana maro ny bolongana. Azo andramana avokoa ny mampiasa loko, soratra, sary, sns. Nahatalanjona ahy ny zavatra vitako fony aho namaham-bolongana voalohany. Tsy mba tao an-tsaiko velively izany hoe afaka manangana bolongana anie aho, dia mamoaka lahatsoratra ao, ary manangona ihany koa izay zavatra vao nianarako.
Hitako izao fa betsaka kokoa ny lehilahy noho ny vehivavy ao amin’ny Voces Bolivianas. Midika ve izany aminao fa ny lehilahy no voasinton’ny bolongana kokoa noho ny vehivavy?
Any ambanivohitra dia ny ankizivavy no mandao ny sekoly voalohany, ary ny isan’ny ankizivavy no vitsy kokoa noho ny isan’ny ankizilahy nahavita ny fianarana. Ny anton’izany dia avo kokoa ny tahan’ny tsy fahaizana mamaky teny sy manoratra eo amin’ny vehivavy noho ny eo amin’ny lehilahy. Mbola mitombina izay toe-javatra izay eo amin’ny fahafahana miditra amin’ny aterineto sy ny haitao vaovao. Mino aho fa tsy fantatry ny ankamaroan’ny vehivavy eto Bolivia izany bolongana izany. Zavabaovao tsy fantatry ny olona fa mety hanampy azy amin’ny raharahany anie izany bolongana izany.
Nahoana no nantsoinao hoe Bolivia Indígena ny bolongana natsanganao?
Ahitana indizeny isankarazany eto Bolivie. Maherin’ny 30 ny isan’ny foko indizeny ary ny Aymara, ny Quechua, ary ny Guarani no maro an’isa indrindra. Fa misy vondrona hafa koa mazava loatra. Araka ny fanisana natao tamin’ny 2001dia 62%n’ny Boliviana no mihevitena fa indizeny ary mitombo izany araka ny fivoaran’ny taona. Ho ahy manokana dia zava-dehiba ho ahy ny mahalala ny kolontsain’ny razambenay. Ary dia heveriko fa ny Bolivia Indígena no maneho ny zavamisy eto amin’ny firenena.
Tamin’ny ankapobeny dia ny momba ny tanànan’i El Alto ihany no nosoratanao nandritra ny volana voalohany namahananao bolongana, saingy efa niresaka lohahevitra maro kosa ianao ankehitriny. Nahoana moa no niova ny lohahevitra tao amin’ny bolonganao? Marina izany, ny fiainana andavanandron’i El Alto no nosoratako tamin’ny voalohany. Nihanivelatra sy nihamaro ny votoatiny avy eo. Mbola nosoratako ny momba an’i El Alto, saingy nampidiriko ihany koa y resaka momba ny fiainana boliviana sy ny foko miaina any amin’ny firenena hafa. Saiky hanoratana ny momba ny tantara no nokasaiko hananganana ity bolongana ity saingy niafara tamin’ny fitantarana ny andavanandrom-piainana ihany izany.
Nanatrika ny Bloguivianos ianao. Ny fihetsehamponao ?
Nampientanentana be ny Bloguivianos. Tsy mbola nahalala mpamaham-bolongana na iza na iza aho talohan’ny nandehanako tao. Toy ny miditra an-trano iray hahitana zavatra tsy ampoizina hatrany isaky ny miditra varavarana iray ny mihaona amina mpamaham-bolongana hafa, izay efa za-draharaha ny sasany. Tafahaona tamina mpamaham-bolongana teratany maro tahaka an’i angelcaido, animaldeciudad, perrorabioso, urbandinos, reciclarte, palabraslibres, tevelision , ankoatra ny hafa.
Nanatrika ny fivoriambe ho an’ny vehivavy ihany koa ianao, tao Santa Cruz. Inona moa no tanjon’ny valandresaka? Eriteretinao ve fa mety ho fitaovam-pamoahan-kevitra mahomby hoan’ny vehivavy ao Bolivia ny bolongana?
Notontosaina tamin’ny volana septambra tao Santa Cruz tokoa ny fivoriamben’ny fitakian-jom-behivavy fahaenina teto Bolivia. Zavadehibe amiko tokoa ny mahafantatra izay eritreretin’ny vehivavy any amin’ny tanandehibe hafa. Mino aho fa ilaina ny bolongana mba hilazana ny traikefa ananana sy ny toerana misy ny tsirairay. Nefa tsy maintsy fantarina ihany koa fa mbola betsaka ny tsy afa-mivoivoy amin’ny aterineto. Misy aterineto ihany amin’ny tanandehibe fa tsy izany kosa no mitranga any amin’ny tanàna antonontonony sy madinidinika. Mampihena be dia be ny fahafaha-mifanerasera an-drohy ho an’ny maro izany fahabangana izany.
Inona ary izao no nandrisika anao hanoratra sy hizara ny tantaran’ny fokonolonareo amin’ny alalan’ny aterineto?
Fitaovana iray nanome fahalalahana hiteny ny bolongana ary ahafahana maneho ihany koa ny fiainanao eo amin’ny fiarahamonina. Efa naniry ny hanoratra aho hampiseho ny zavamisy any amn’ny mponina indizeny Boliviana any. Tsy dia misy loatra manko ny bolongana miresaka momba izany hany ka mahatsiary manana adidy aho hanoratra mandrakariva momba io lohahevitra io.
Misy hafatra tianao ampitaina amin’ny mpamakin’ny Global Voices ve?
Ry mpamakin’ny Global Voices: manoratra aminareo avy aty amin’ny haavon-toerana mihoatra ny 4 000 metatra aho. Avy aty izahay no mikopak’elatra ka tonga any amin’ny solosainareo mba hahafantaranareo ny fisianay amin’ny alalan’ny fitsidihana virtoaly.
Soratra miverina: El Oso, El Moreno, and El Abogado » Blog Archive » Open Software, Open Content, Open Translation Part IV
[…] Voices’ kind volunteers translated it into French, Portuguese, German, Bengali, Spanish, and Malagasy. Note that not only was the post translated into all those languages, but the video was also […]
21 Desambra 2007, 17:29
In Madagascar, I can’t download any video to subtitle… any way it’s difficult for me to subtitle
22 Desambra 2007, 07:12